ခေတ်ပေါ်အချစ်ဇာတ်လမ်းသစ်မှာ စုံတွဲအဖြစ်ပါဝင်လာနိုင်တဲ့ Gong Jun နဲ့ Zhao Lusi | Asia News Bar
Ro ဆန်ဆန် တရုတ်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် နောက်ထပ်ရိုက်ကူးတော့မယ့် “The Sun is Like Me” ဆိုတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းတွဲမှာတော့ ပရိသတ်တွေအကြိုက်တွေ့စေမယ့် ဇာတ်ဆောင်နှစ်ယောက်ပါဝင်လာနိုင်ချေရှိတဲ့အကြောင်း သတင်းတွေထွက်ပေါ်လို့ နေပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာ နာမည်ကြီးရေပန်းစားနေတဲ့ Gong Jun နဲ့ Zhao Lusi တို့ကတော့ ဒီဇာတ်လမ်းသစ်မှာ စုံတွဲတွေအဖြစ်ပါဝင်ရိုက်ကူးဖို့ အလားအလာရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ “The Sun is Like Me” ဆိုတဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ “You Are My Glory” နဲ့ “Love O2O” ကို ရေးသားခဲ့သူရဲ့ နောက်ထပ်လက်ရာမြောက်တဲ့ အချစ်ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ ချမ်းသာတဲ့မိသားစုမှာမွေးဖွားလာခဲ့တဲ့ Nie Xiguang ကတော့ တည်ငြိမ်အေးဆေးပြီး ဘဝကိုရိုးရှင်းစွာနဲ့ဖြတ်သန်းနေသူလေးပါ။ သူမကတော့ ကောလိပ်အတူတက်တဲ့ Zhuang Xu ကို တဖက်သတ်ကြိုက်နေခဲ့တာကြောင့် ဖွင့်ပြောခဲ့ပေမဲ့ တစ်ဖက်ကဘာမှတုံ့ပြန်ခြင်းမရှိတာကြောင့် သူမရဲ့အချစ်တွေကို ရုတ်သိမ်းပစ်ခဲ့ပါတော့တယ်။
ဒီလိုနဲ့ ဘွဲ့ရပြီးနောက် အလုပ်ဝင်တဲ့အခါမှာ အထက်အရာရှိ Lin Yusen နဲ့ ဆုံတွေ့ပါတော့တယ်။ Lin Yusen ရဲ့ ပညာပြမှုတွေကြောင့် Xiguang ဟာ အလုပ်ထွက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတဲ့အထိ လမ်းပျောက်ခဲ့ရရှာပါတယ်။
တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မတည့်အတူနေ ခပ်တန်းတန်းဖြစ်နေရင်းက Xiguang ဟာ Lin Yusen ရဲ့ ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပုံစံ၊ သူခံစားနေရတဲ့နာကျင်စရာပုံရိပ်တွေကို တဖြည်းဖြည်းချင်းမြင်တွေ့လာခဲ့ရပါတော့တယ်။ နောက်ပိုင်းမှာ​တော့ သူတို့ကြားက အထင်အမြင်လွဲနေတဲ့ကိစ္စတွေကို သဘောပေါက်သွားခဲ့ကြကာ အရာရာအဆင်ပြေလာပြီး ချစ်ကျွမ်းဝင်နေကြတုန်း မထင်ထားတဲ့လူတစ်ယောက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။
Nie Xiguang ရဲ့ အချစ်ဦး Zhuang Xu က Nie Xiguang နဲ့ Lin Yusen တို့ ဘဝထဲကို ရောက်လာခဲ့ပြီးနောက်.. ဘယ်လိုတွေဆက်ဖြစ်လာမလဲ? အချစ်ဦးနဲ့အချစ်ဆုံးထဲက ဘယ်တစ်ယောက်ကို Zhuang Xu ရွေးချယ်မလဲ? Lin Yusen နဲ့ တည်ဆောက်နေတဲ့အချစ်ရေးကကော အဆင်ပြေပါ့မလား..? စသဖြင့် စိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်ညွှန်းလေး ရှိနေပါတယ်။
၂၀၂၂ ရဲ့ ဒုတိယနှစ်ဝက်လောက်မှာ စတင်ရိုက်ကူးဖို့ စီစဥ်ထားတာဖြစ်ပြီး အချိန်တွေအတော်ရသေးတာကြောင့် ဇာတ်ဆောင်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကမ်းလှမ်းမှုတွေကိုသေချာစီစစ်ပြီး ပြုလုပ်လို့ရနေပါသေးတယ်။ လက်ရှိအချိန်အထိတော့ အဓိကဇာတ်လိုက်တွေအဖြစ် Gong Jun နဲ့ Zhao Lusi တို့ကတော့ နာမည်တွေထွက်နေပြီဖြစ်လို့ ရိုက်ကူးရေးဖက်ကအတည်ပြုပေးမယ့်အချိန်ကို စောင့်ရဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
Next ကျရာဇာတ်ရုပ်တိုင်းကို အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ ThaiTV3က မင်းသမီး ၅ ဦး »
Previous « “riBBon” Album ကနေ နားဆင်တဲ့သူတွေအား ပေးချင်တဲ့ Message ကို ပြောပြခဲ့တဲ့ BamBam
ပထမဆုံးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ Offical Trailer နဲ့တင် ပရိတ်သတ်တွေကိုကျေနပ်မှုအပြည့်အဝပေးနိုင်ခဲ့တဲ့ Wind From Luoyang ဇာတ်လမ်းတွဲ
Street Dance China Season(4) မှာ Mentor အဖြစ်ပါဝင်မယ်လို့ သတင်းများထွက်ပေါ်နေတဲ့ Wang Yibo, GOT7 အဖွဲ့ဝင် Mark Tuan နဲ့ EXO အဖွဲ့ဝင် Lay
Twitter မှာ Exclusive Topic Section ကိုအသီးအသီးရရှိခဲ့ကြတဲ့ Xiao Zhan နဲ့ Wang Yibo